Ibhayisikobho sitcoms to comedies yothando izindaba ezivela kubangani, sonke siyazi ezinye amaqiniso yonke-yavuma ngezothando. Nokho, ngokusho isayensi iningi lalezi “Amaqiniso” kukhona okungalungile. Ngakho obaziyo engaphansi mayelana romance kunalokho obukucabanga wena wenza, kuze kube manje.
Inganekwane #1: Gamers kukhona izintombi lonely.
Through Hollywood, sonke sazi “Gamer lesi sididi sakho sendoda ayikaze wathinta a boob” ngemibono. Ngini kanjalo, lapho sizwa izwi Gamer, sivame cabanga ngendoda mncane kakhulu noma fat ogama romance liqukethe Xbox izingxoxo okwenzeka engaphansi umzali wazo. Ngokusho isayensi, lezi gamers lesi sididi sakho sendoda Ulakho ukuphuma ngezinsuku okungezona gamers. Okuningi, ne yokudlala emakethe ekhula ngaphezu ukwanda imidlalo yabadlali abaningi, yokudlala empeleni abe popular ice full. Futhi, ake Ungakhohlwa mayelana imidlalo online lapho abantu bahlangana futhi bawile in love.
Inganekwane #2: Dating Online akuyona nje yokugcina kodwa kuphela edonsela losers.
Ngeshwa, yimizamo marketing ngabomvu ngaphezu amaphrofayli angenalo iqiniso, ukuphola online uye ayithole a rap embi iminyaka. Ngokuvamile, ezingqondweni zethu ukuthi zanquma njengoba yokugcina yokufakazela umzamo ekutholeni umphefumulo wakho womshado; Nokho, kulawa kukhona okungalungile. Kube ucwaningo lwamuva ukuthi baye babonisa ukuthi oyedwa kwabahlanu dating site abasebenzisi thola umphefumulo wabo womshado online. Futhi, 94% of ntu Ukwakha ubuhlobo online uyophuma ngosuku lwesibili, okuyindlela ngaphezu iphesenti abantu abahlangabezana offline. Kungani lokhu? Ngoba ukuphola online iwukutadisha computer, Abantu bavame ukuba qotho xaxa futhi upfront njengoba benjalo “ekhuluma computer”. Cabanga ngalokhu, ubungayiphendula imidlalo GUTS yakho kumuntu nje wahlangana at a bar? Esinye isizathu esikhulu yimanje online wukuthi kungcono ukuzigcina iphila futhi beba kuthandwa. The amathuba ukuthi uzothola umuntu okufunela Kunjalo eliphezulu kakhulu.
Inganekwane #3: In ubudlelwano, abesifazane zinemizwelo namadoda ezinengqondo.
Sike umbonile amabhayisikobho ezingenakubalwa futhi ubonisa ukuthi akhawunti kwabesifazane okuncane wakhala izinyembezi phezu a guy noma sokuhlaziya ubuhlobo kanti umuntu ibonakala oblivious futhi Suave ngenkathi ngokuwina inhliziyo yowesifazane njalo. Isayensi uthi amadoda kakhulu ngokomzwelo ehlaselwe ubuhlobo drama kunabesifazane, ukuthi nje siwubonisa. Women ngivamise ukuba ubuhlobo obuseduze umndeni nabangane kokuvumela ukwesekwa ngokomzwelo ikakhulukazi uma kuziwa guy enkingeni. Guys bavame nje isifuba abalingani babo ngokwenza impi ikakhulukazi kanzima kuwo.
Inganekwane #4: Ukulwela amalungelo obulala romance.
With the ngemibono ukuthi feminists besifazane abazimele abangasweli ubuhlobo noma umuntu ukuba uziqede azixhunywe ezizukulwaneni eziningi, empeleni okungalungile. Abesifazane abazibheka feminists kukhona kaningi ngaphezu hhayi ubuhlobo kwabobulili. Amadoda abashade besifazane abaye babike ukuthi ukuphila kwabo sex kwanelisa ngaphezu kwalabo akuzona. Ngakho, nakuba feminists ngokuvamile ngimbone njengoba yefulaneli, Abesifazane mannish ukuthi empeleni akulona icala.
Inganekwane #5: Imibhangqwana abahlala ndawonye ngaphambi kokushada ikulungele kangcono.
Society iye lasuka lokuthi abantu ababili abangashadile ukuthola ndawonye indawo ophila esonweni. Kodwa kulezi zinsuku cishe kunengqondo. Kubonakala kunengqondo uthutha uyohlala ephawulekayo nezinye yakho ngaphambi kokuzibophezela lomthetho angagcina ngesehlukaniso. Ngale ndlela, ungakwazi ukuthola uma Mr. Right ngempela Mr. Right. Ngokusho isayensi, imibhangqwana abaye baphila ndawonye ngaphambi kokushada noma lwekucocisana babe ephakeme kwesehlukaniso nokwaneliseka zomshado aphansi. Imibhangqwana abadlala indlu ngaphambi lwekucocisana ikakhulu esasizobhujiswa uma benza ukuze avivinye ubuhlobo babo. Uma uzizwa njengo testing umlingani wakho, amathuba wena ungeyena kanye eyiyona. Esinye isici esingaba ezihilelekile, umbo- sokulungisa. Couples, Namuhla, aphathe abahlala ndawonye njengoba esinye isinyathelo in the inqubo dating. Uma beqala abahlala ndawonye, bakuthola kunzima nihlukane njengoba ngokwezimali nangokomzwelo baye ixazululwe.
Futhi khona unayo it, Manje wena ukwazi okwengeziwe romance.
Wonke umuntu oye wezwa ukuthi umfana lowo safike emathinini ngoba wayekhona match.com ngesikhathi umsebenzi. Akufanele ...